Uchungechunge oluphambili lwe-HBO oluyi-10 lwaso sonke isikhathi | Iforamu yeselula
Uchungechunge oluphambili lwe-HBO oluyi-10 lakho konke okuthandayo
UDaniel Terrasa | 16/06/2022 15:00 | Kubuyekezwe ngomhla ka- 16/06/2022 15:15 | Izinhlelo
Ukufika kwe-HBO Max eSpain ngo-Okthoba 2021 kwaba injabulo enkulu kubathandi bochungechunge lwekhwalithi. Naphezu kokuncintisana okunzima okukhona phakathi kwamapulatifomu ahlukene okusakaza njenge Netflix o Disney +, ikwazile ukuklama i-niche ebalulekile emakethe. Namuhla sizobuyekeza ezinye zazo uchungechunge oluhle kakhulu lwe-hbo, ezibukelini ezinokunambitha okuhlukahlukene.
I-Ver también: Uchungechunge oluhle kakhulu lwe-Netflix ngokuya ngezintshisekelo zakho
2 I-Boardwalk Empire
4 Isiteshi seshumi nanye
6 Bazalwane begazi
7 Umngani omkhulu
Uchungechunge oluphambili lwe-HBO oluyi-10 lakho konke okuthandwayo: Barry
"I-HBO's Breaking Bad". Le ncazelo ingathathwa kuphela njengokuncoma okukhulu okuvela kubadali be Barry. Isakhiwo salolu chungechunge luka-2018 simnandi ngempela futhi singokoqobo: U-Barry Berkman uyindoda eshaywe kakhulu ecindezelekile futhi ezama ukuqala impilo entsha njengomlingisi edolobheni lase-Los Angeles.
U-Barry uhlanganisa idrama namahlaya ngemithamo elungile nje, into okungahlali kulula ukuyifinyelela. Ibhalansi ephelele emangaze ababukeli abavela kuwo wonke umhlaba. Ukugqamisa iqiniso lokuthi umlingisi ophambili, UBill Hader, futhi ungomunye wabadali balolu chungechunge.
U-Barry (izinkathi ezi-3, iziqephu eziyi-17)
Uchungechunge oluphambili lwe-HBO oluyi-10 lwawo wonke i-Boardwalk Empire
Lolu chungechunge oluyimpumelelo oluthathe amasizini angu-5 phakathi kuka-2010 no-2014 lusengenye yezibukwe kakhulu ku-HBO, ngenxa yezizathu ezisobala. I-Boardwalk Empire iyidrama yenkathi ebekwe eminyakeni ye I-Dry Law e-United States, ukukhiqizwa okufezwe kahle kakhulu okuphinde kwabonisa ukubamba iqhaza kwabalingisi abakhulu.
Indaba igxile empilweni ka Enoch J Thompson (yenziwe ngobuciko ngu USteve Buscemi futhi esekelwe kumlingiswa wangempela) kanye nobudlelwano bakhe nezigelekeqe, abashushumbisi kanye nosopolitiki abakhohlakele ukuze alawule konke okwenzeka edolobheni Atlantic City.
Njengengxenye yekhwalithi, kufanele sigqamise ukubamba iqhaza kwabaqondisi asebekhulile beziqephu ezahlukene. Omunye wabo akekho omunye ngaphandle UMartin Scorsese.
I-Boardwalk Empire (izinkathi ezi-5, iziqephu ezingama-56)
Uchungechunge oluphambili lwe-HBO oluyi-10 lakho konke okuthandayo: I-Chernobyl
Kuyashaqisa nokushaqisa nje. I-Chernobyl Bekuyizinga elihle le-HBO ekufikeni kwayo eSpain futhi, vele, iwuchungechunge lwekhwalithi ephezulu kakhulu engazange iphoxe muntu.
Isakhiwo sale miniseries saziwa ngokudabukisayo: konke okwenzekile mayelana ne Inhlekelele yenuzi yaseChernobyl, ngo-April 1986, eminyakeni yokugcina yeSoviet Union, kanye nemizamo yokuhlanza engakaze ibonwe eyalandela le nhlekelele.
Iningi lombhalo liphefumulelwe yincwadi Amazwi avela eChernobyl, evela kumnqobi weNobel Prize yaseBelarusian USvetlana Aleksievich kusukela ebufakazini obuqoqwe edolobheni lasePrypiat.
I-Chernobyl (isizini engu-1, iziqephu ezi-5)
Isiteshi seshumi nanye
Uchungechunge oluphambili lwe-HBO oluyi-10 lakho konke okuthandayo: Isiteshi Seshumi nanye
Le miniseries yenganekwane yangemva kwe-apocalyptic ingelinye lamagugu amakhulu asishiyele wona ngo-2021. Icebo le Isiteshi seshumi nanye kusiyisa e-United States ebhujiswe ukucekelwa phansi kwe-a igciwane owaziwa ngokuthi I-Georgia Flu, lapho iqembu labasindile (iqembu laseshashalazini) lizulazula esifundeni saseGreat Lakes njengabazulane.
Isekelwe encwadini yegama elifanayo lombhali Emily St John Mandel, ngeskripthi esiklanywe kahle, abalingisi abahle kanye nenani elihle lezimanga ezigcina umbukeli ebambelele esikrinini.
Isiteshi seshumi nanye (isizini engu-1, iziqephu eziyi-10)
Uchungechunge oluphambili lwe-HBO oluyi-10 lakho konke okuthandayo: Ama-Hacks
Abagxeki abafuna kakhulu bavumile ukusho Hacks njengolunye lwesambulo esikhulu sochungechunge lweminyaka yakamuva, olunempumelelo enkulu emphakathini.
Uchungechunge luxoxa ngendaba yabalingiswa ababili: UDeborah Vance no-Ava Daniels. Eyokuqala inkanyezi yamahlaya evela eLas Vegas esesikhathini esibucayi emsebenzini wayo: ukuqala kokwehla; owesibili ngumbhali wamahlaya osemncane okhishwe inyumbazane ngenxa ye-tweet ewundabuzekwayo. Yize kunokungaboni ngaso linye phakathi kwabo, bobabili bayahlangana ukuze bahlangane futhi balandelele imisebenzi yabo.
Ngaphezu kwemidlalo emihle yabalingisi abahamba phambili (uJean Smart noHannah Einbinder), isihluthulelo sempumelelo yalolu chungechunge sisekugxekeni ngesibindi kwabadlali. khansela isiko kanye nokunemba kwezombusazwe okuncisha umoya okukhona namuhla e-United States.
Ama-Hacks (izinkathi ezi-2, iziqephu eziyi-18).
Uchungechunge oluphambili lwe-HBO oluyi-10 lakho konke okuthandayo: Abazalwane begazi
Sekudlule iminyaka engaphezu kwengu-20 kusukela kwadlalwa okokuqala ngqa le miniseries enkulu futhi nanamuhla kuseyisimangaliso. Bazalwane begazi (Ibhendi yabafowethu) ukuguqulwa kwencwadi ka UStephen E Ambrose, lapho kuxoxwa khona ukuguquguquka kwenkampani yama-paratrooper aseMelika kusukela ekuqeqeshweni kwabo kuze kube yilapho bengena empini eYurophu ekupheleni kweMpi Yezwe II.
Uchungechunge lusekelwe isiqinisekiso se USteven Spielberg noTom Hanks njengabakhiqizi nabadali. Umphumela, nakuba uhlanekezela umbhalo wokuqala wencwadi ezicini eziningi, uwuchungechunge olujabulisayo lwekhwalithi ephezulu kakhulu. Kuyinhlanhla, ngemuva kweminyaka eminingi kangaka, ukwazi ukuqhubeka nokukujabulela ku-HBO.
Abazalwane Begazi (isizini engu-1, iziqephu eziyi-10)
Uchungechunge oluphambili lwe-HBO oluyi-10 lakho konke okuthandayo: Umngane omuhle
umbhali oyimpicabadala U-Elena Ferrante (igama-mbumbulu lombhali ongaziwa) ungumqambi we-tetralogy ethandwayo indawo yayo emaphakathi kuyidolobha I-Naples: "indaba yabangane". Ingxenye yokuqala, ebekwe eminyakeni enzima yangemva kwempi, ilethwe kumabonakude ngochungechunge oluthinta imizwa noluklanywe kahle: Umngane omuhle.
Ngokungafani nezinye izihloko kulolu hlu, umqondisi wochungechunge, Saverio costanzo, uye wawuhlonipha ngokucophelela umbhalo wokuqala nayo yonke imininingwane yawo. Lo mzamo wokuthembeka kanye nozibuthe wendaba yabangane ababili ukwanele ukujabulisa ababukeli abavela kuwo wonke amazwekazi.
Umngane omuhle (izinkathi ezi-3, iziqephu ezingama-24)
Uchungechunge oluphambili lwe-HBO oluyi-10 lakho konke okuthandayo: Ama-Sopranos
Ongakusho mayelana AmaSopranos Yini engake ishiwo? Ifaneleka ngochwepheshe abaningi njengochungechunge olungcono kakhulu lwaso sonke isikhathi, ngokungangabazeki ingenye yokubheja okuhle kwe-HBO. Yaqala ukusakazwa phakathi kuka-1999 no-2003, nakuba kamuva yaba uchungechunge lwehlelo elihlonishwa yonke indawo. Abanye baze bathi Iminyaka emihle yochungechunge yaqala ngalolu.
Lokhu kungaphezu nje kochungechunge lwama-mobster. Idrama enamaphuzu ahlekisayo, eqeda ubukhazikhazi bamanga beMafia yase-Italian-American Mafia futhi yethula iziqephu ezinhlobonhlobo ezihlanganiswa ebudlelwaneni be-capo. Tony soprano (edlalwe kahle nguJames Gandolfini) kanye ne-psychotherapist yakhe, Udokotela uMelfi.
Uchungechunge lwe-Sopranos lwaba isenzakalo sangempela. Ukukhiqizwa okukhanya kuzo zonke izici: ukwenza, ukuhlela... Cishe eminyakeni engamashumi amabili kamuva, kusewuchungechunge lwezinkanyezi ezinhlanu (okumele) lubonakale.
I-Sopranos (izinkathi eziyisi-6, iziqephu ezingama-86)
Uchungechunge oluphambili lwe-HBO oluyi-10 lakho konke okuthandayo: Intambo
"Bass lalela", okuyisihloko olwasakazwa ngaphansi kwaso lolu chungechunge eSpain, sisedolobheni lase-US i-Baltimore futhi sigxile ekuxhumeni ucingo kwezomthetho okuholwa yiqembu lamaphoyisa elikhethekile. Umbhalo ubhalwe yintatheli UDavid Simon, osekuyiminyaka eminingi ephenya lolu hlobo lwesenzo.
Isizini ngayinye kweziyisihlanu ze The Wire kulandela itulo elihlukile: ukushushumbiswa kwezidakamizwa, ukushushumbiswa kwezimpahla, inkohlakalo yezombangazwe, amaqembu ezigebengu zentsha kanye nezingubo ezingcolile ezivela kwabezindaba.
Ukuduma okuningi kweThe Wire kungenxa yokuthi uMengameli u-Obama umemezele esidlangalaleni ukuthi wuchungechunge alukhonzile. Kumelwe kushiwo futhi, ngezigidi zabantu emhlabeni wonke phakathi kuka-2002 no-2008. Futhi kusenjalo nanamuhla.
I-Wire (izinkathi ezi-5, iziqephu ezingama-60)
Uchungechunge oluphambili lwe-HBO oluyi-10 lakho konke okuthandayo: Abalindi
Kungesinye sezimangalo ezinhle kanye nefulegi lokunikezwayo kwamanje kochungechunge lwe-HBO. abalindi ("Ababukeli") isuselwe kunoveli eyingcaca ka- Alan Moore eshicilelwe yi-DC Comics. Okusho ukuthi, livela emhlabeni wamaqhawe amakhulu ephepha.
Itulo labaLindi lenzeka kwelinye izwe lapho abaqaphile, ababethathwa njengamaqhawe, manje sebebukwa ngezinsolo futhi banqatshelwe ukusebenzisa amandla abo, ngokuba nodlame kakhulu. Kulo mongo, kuphakama usongo olubi: iqembu labamhlophe abazibiza ngokuthi I-XNUMX Kavalry, omgomo wabo uwukuqothula izinhlanga ezincane. Iziphathimandla, zikhathazekile ngokushintsha kwezigameko, zizophoqeleka ukuthi zilungise futhi zicele usizo lwabaqaphile.
Ngokukhiqizwa kwezigidigidi zamadola, Abalindi baba uchungechunge olubukwe kakhulu ngo-2019. Kusukela lapho, abalandeli emhlabeni wonke bebelindele ngabomvu ukumenyezelwa kwesizini yesibili.
Abalindi (isizini engu-1, iziqephu eziyi-9)
Indlela ephelele ye-athikili: Iforamu Yeselula » Izinhlelo » Uchungechunge oluphambili lwe-HBO oluyi-10 lakho konke okuthandayo
Lezi izici ezintsha eziyi-10 ezimangaza kakhulu ze-iOS 16
Isoftware yewebhu engcono kakhulu yeWindows